Ndakawona beche rakaitwa kuyanikwa apa rakanunira mukati | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Ndakawona beche rakaitwa kuyanikwa apa rakanunira mukati
Ndainge ndichangobva hangu kubasa ndichibva panight shift ndinerimwe zemo rekuti ndaiti ndikawona chidya chemukadzi mboro yaibva yamira.Ndakafonera rimwe babe randainge ndine crush naro apa raidanana kumumwe blaz aiva necash achifamba mota dzinodhura.This guy was married but ayipa babe iri zvese zvaayida including nhumbu but kubva paakanzwa kuti babe rane nhumbu akangomusiya asi mari ayitumira every month.
Inini nebabe iri we were like friends with benefits since ndaipota ndichimusvira paanenge agarisa. Ndaitoita zvekutamba hangu ndikati ndiuye here kuzoisa nzeve panhumbu yako iyo since ndaiziva hangu kuti haana mumurume. Akanditi shamwari usadaro nekuti mboro ndinoida kusvika magwana.
Since yainge iri weekend ndakangoti ndirikuuya now, ndakarova mota kusvika paChegutu ndokumira ndichitenga Chicken Inn kuti ndisvike ndakabatawo something ahh ahh varume ndakarohwa nehana ndasvika ndichiwona munhu asina kana hembe akagara mudinning akaita kuyanika beche zvekuti ndaiwona rakaita kununira ndichibva ndadonhedza chicken inn pasi ndokubvisa bhurugwa ipapo. Mboro yainge yatomira kare ichiita kudedera nehukasha.
Zvakangonzi huya ukwire hanti ndozvawayinga apa munhu ainge achiita kunge anemakore matatu asati asvirwa inini ndainge ndabva kunwa ma red bull zvekuti ndainge ndatova nema wings anotaurwa aye. Ndakaita beche rekupfugamira ndokubva ndatanga kusvira zvekuti ndainzwa kunge mboro irikudhonzwa mukati, kunakirwa kwacho kwaisvika kugotsi chaiko.
Ndakaramba ndirichisvira nepaside apa mboro yaiyita kutsvedzerera ichipinda ichibuda and ndaiwona movement yacho yese. Ndakarova beche varume apa kudziya kwacho ndaibva ndatadza kuzvidzora, beche remukadzi anenhumbu rinonaka mhani. Takasvirana pasofa kusvikira ndatunda ndokubva tambomira ndakuda something to eat nekuti simba rese rainge rapera rese kuita kunge munhu abva kumhanya marathon.
Takapedza kudya hedu apa tainge tisina kupfeka ko ainge ataura kuti arikuda kurohwa beche husiku hwese.Ndakati ndapeza kudza apa rezvima redbull zvandainge ndichinwa muroad ndichiuya, mboro yangu yaiyita kunge yakabatidzwa worse patikadzokera pasofa, ka yellow-bone kaye kaibva kaiyita kuti ndiite kunge munhu arikudhonzerwa pakati pemakumbo ake. Skyler ayiita kunge munhu anongogara akatota kare guys mboro yangu yaingoita kunyura zvisina kana kumanikidza and for munhu ainge ane nhumbu airova chimwe chikapa chandisati ndamboitira pano pasi.
Ndakamusvira pasofa ndokubva tazosimudzira mubedroom make, ndakarova beche husiku hwese kusvika makuseni ndipo pandakabuda ndakuyenda kumba kunogadzirira basa for Monday. I am not sure kuti Skyler arikubatsirwa rinhi asi I can’t wait kuti andidaidze futi ndinomusvira zvakare…
kusvira mukadzi anenhumbu
Previous articleNdakaridza kamhere apa ichinyura yese zvisina tsitsi
Next articleAkanditi arikutoda kusvirwa nekuti nguva yainge yareba